Saint Vincent sy ny Grenadines nanao sonia ny TPAN - Ny Diabe Eran-tany
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Saint Vincent sy ny Grenadines dia nanao sonia ny TPAN
04 / 08 / 2019 03 / 08 / 2019 ny Action Plus Tester
Ny ICAN dia mankasitraka ny fankatoavana ny fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary amin'ny alàlan'i Saint Vincent sy ny Grenadines
Saint Vincent sy ny Grenadines dia nanao sonia ny Fifanekena amin'ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary. Ny lanonana fisoratana anarana dia natao tamin'ny Jolay 31 ny 2019 tao amin'ny foiben'ny Firenena Mikambana, any New York, Etazonia. Ny fampielezankevitra iraisam-pirenena hanafoana ny fitaovam-piadiana niokleary niokleary (ICAN) dia miarahaba an'i St. Vincent sy ny Grenadines. Ny fankatoavany ny Fifaneken'ny Firenena Mikambana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana niokleary amin'ny Jolay 31 an'ny 2019 dia hetsika mendri-kaja. Izany dia taratry ny fanoloran-tena nataon'ny firenena Karaibeana amin'ny tontolo tsy misy fitaovam-piadiana niokleary.
Saint Vincent sy ny Grenadines nanao sonia TPAN
Saint Vincent sy ny Grenadines dia mpikambana fahatelo ao amin'ny CORICOM, hanamarina ny fifanekena. Ny teo aloha dia Guyana sy Saint Lucia. Jamaica sy Antigua sy Barbuda, izay mpikambana roa hafa ao amin'ny vondrom-piarahamonina Karaiba dia nanao sonia ny fifanarahana ihany koa. Na izany aza dia mbola tsy nankasitrahan'izy ireo izany. Ny roa amin'ireo mpikambana ao amin'ny CORICOM no nifidy ho fananganana ny fifanarahana ny Firenena Mikambana tamin'ny Jolay 7 ny 2017.
Ny fanohanana iraisam-pirenena matanjaka ho famaranana ny fandrahonana nateraky ny fitaovam-piadiana niokleary
CARICOM dia namariparitra azy io ho toy ny taratry ny "fanohanana iraisam-pirenena matanjaka amin'ny faran'ny fandrahonana ateraky ny fitaovam-piadiana niokleary". Tamin'ny volana Oktobra 2018, CARICOM dia nanambara fa antenaina fa ny mpikambana sasany ao amin'ny mpikambana ao dia nilaza fa hanasonia sy hanamarina ny Fifanarahana: "ao anatin'ny fotoana fohy, rehefa mitady ny fandraisan'anjara amin'ny fampidirana haingana ny hery ary ny fidirana amin'ny laoniny iraisana." Firenena mpikambana marobe CARICOM dia mikasa ny handray anjara amin'ny lanonana fanaovana sonia sy fanamarinana avo lenta amin'ny TPAN. Ny 26 ny volana septambra dia hatao any New York. Amin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny famongorana tanteraka ny fitaovam-piadiana niokleary.
Fuente: FAHASALAVANA INDRINDRA INDRINDRA - 01 / 08 / 2019
Hetsika miavaka tamin'ny martsa manerantany (1)